Jake's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (11)Discussions (484)EventsGroups (11) Jake's Likes Gifts Received (2)
Wanted: Engineer with Linux and Mail experience
Started this discussion. Last reply by Jake Feb 15. Job Vacancy: Network Engineer Based in Yangon
Started this discussion. Last reply by Jake May 3, 2012. Free Anti-Virus for one year
Started this discussion. Last reply by Jake Jan 21, 2012. View All
Hantharwaddy Tech Blog
Hsatpaing joined Jake's groupSingapore IT Business CollaborationA place to collaborate our companies, organizations and businesses as well as increasing the contact network and sharing product knowledge.Nov 22 10
Jake replied to U Win Myint's discussion A good printer?"Don't you have local warranty if it's spoiled withinayear? Actually all the major brands are notabad choice. You just need to make sure to use original ink cartridge or toner for replacement rather than after market refill."Sep 21Jake replied to Chan Nyein Oo's discussion ပရင်တာ အရောင်မှန်ထွက်စေရန်"Did you use original Canon cartridge or after market refill?"Sep 21Jake replied to Pyie Sone's discussion Can i get suggestions?"IP Networking and Mobile Communication is different. You won't get to learn OSS/BSS, Radio Frequency, etc. in CCNA or other IP networking. The job role in telco is also different. Aruba Networks is wireless LAN vendor.
I don't see any big…"Sep7More... RSS
At 7:28am on September 3, 2012, Acsmtl said… Hi jake
Thank you for your reply. That give mealot of information. At 9:07pm on June 30, 2012, Thet said… Hi Jake,
Router 2620 or 2621 and Please let me get 3550 price too. Thank you. At 11:52pm on April 23, 2012, kowin said… ကျနော်က ရောက်တာမကျာတေးတော့ဘယ် ကောင်း၂ မသုံးတတ်တေးဘူးဗျ နာလယ်ပေးကျနော် At 11:33am on January 20, 2010, Kyaw Win Htun said… Thankalot Brother. At 2:06pm on January 09, 2010, mr.hoe gave Jakeagift…Red RibbonRed RibbonFrom the Gift Store No comments yet!
Online Payment - Part 1 (Zawgyi font)
Posted on May 16, 2012 at 8:37am5Comments
မြန်မာပြည်မှာ Online Payment နဲ့ပတ်သပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေကြတာ အကောင်အထည်ဖော် နေကြတာ တွေ့နေရတာရယ် လုပ်ကိုင်ချင်တယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ မေးမြန်းကြတာကြောင့် Online Payment အကြောင်းကို လေ့လာထားသလောက် ပြန်လည်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Online Payment ဟာ multi-party လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်တယ့်အတွက် လက်တွေ့မှာ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ အနည်းငယ် ကွဲပြားနိူင်ပါတယ်။
Continue Refurbished Cisco for sale
Posted on March 2, 2012 at 2:31pm7Comments
Does anyone want refurbished Cisco? If you are in Singapore, all equipment has 1 year hardware warranty, return to seller for replacement. Let me know the model you want and I will let you know the price.
If you are from Myanmar, there will beafew equipment available between March 19-31 2012 at Yangon. You can test, cash and carry on the spot. If you wantaparticular model, drop me PM and reserve the stock.
The models include, all previous end-of-life/sale… Continue စီးယက်စ် Cius (သို့) - Enterprise Android Tablet by Cisco
Posted on June 30, 2010 at 10:30pm7Comments
Android ဆိုတာ စွယ်စုံ သုံးလို့ရတယ့် OS တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် သေးငယ်ပေါ့ပါးတယ့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ အတွက် တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေမှာ စတင်ခတ်စားရာကနေ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ tablet တွေမှာပါ တော်တော်လေး အသုံးပြုဖို့ စတင်နေပါပြီ။ Android ကို အသုံးပြုတယ့် tablet အများအပြားကို အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ နောက်နှစ်ဦးပိုင်း လောက်မှာ ဈေးကွက်ထည်းမှာ တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ဆက်သွယ်ရေး နာမည်ကြီး company… Continue IDS/IPS ဆိုတာ
Posted on June 23, 2010 at 11:42am5Comments
Networking group မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ့် IDS/IPS အကြောင်းကို ဒီမှာ နည်းနည်းလောက် ပိုပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ IDS/IPS အဓိပါယ်ကို မြန်မာလို မပြန်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ IDS/IPS မှာ host-based နဲ့ network-based ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Host-based ကတော့ server (သို့) client ကွန်ပျူတာ တွေပေါ်မှာ install လုပ်ထားလေ့ရှိတယ့် software ပါ။ သူက virus, malware နဲ့ spyware တွေက ကွန်ပျူတာရဲ့ system နဲ့ တခြား application တွေကို မဟုတ်တာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ့်အခါ user ကို သတိပေးပြီး ကာကွယ်ပေးတယ့် software မျိုးပါ။… Continue iPhone 4
Posted on June 8, 2010 at 2:02pm 10 Comments
မနေ့ကညက မအိပ်ပဲ WWDC 2010 Live blogging ကို Engadget ကနေ ထိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Steve Jobs ကြေညာမယ့် iPhone အသစ်ရဲ့ availability date ကို သိချင်တာပါ။ iPhone အသစ် ဘယ်လိုပုံစံ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဗီယက်နမ်က ပေါက်ကြားခဲ့တယ့် သတင်းတွေထဲက မြင်ထားပြီးဖြစ်လို့ သိပ်ပြီး မထူးစမ်းတော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်နဲ့ဆို WWDC တိုင်းမှာ iPhone အသစ်တွေ ကြေညာတာ ၄ နှစ် ဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။iPhone အသစ်ကို iPhone4လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် 4G လို့မခေါ်ပါဘူး။ ဒီတခါတော့ 3GS… Continue AddaBlog Post